Shintsha indlela yokuziphatha kwamakhasimende ngeBadegeville | IMarTech Blog
IBadgeville: Ukukhuthaza Ukushintsha Kokuziphatha ngeGamification
NgoLwesihlanu, ngoJuni 22, i-2012 NgeSonto, Septhemba 8, 2013 Douglas Karr
Ikhono lokushintsha indlela yokuziphatha kwamakhasimende kungaba yindlela engcwele yabathengisi be-e. Inselelo ngokubandakanya amakhasimende endaweni yanamuhla ukwethembeka kwabo okudlulayo lapho bebhekene nezinketho eziningi. Ukuxazulula lokhu, amabhizinisi kufanele ashintshe amasu ohambweni noma ahlinzeke lokho okufunwa yikhasimende ngokuphazima kweso. Lokhu akwenzeki njalo ngezinsizakusebenza eziyindlala zanamuhla. Ukumaketha isu elisiza abakhangisi ngale mizamo.
Inkampani eyodwa yokudlala ese-roll manje isikhona Badgeville. Muva nje iBadgeville idlule kolunye uhlangothi lwezezimali, yathola i- I-Gamification Wiki, futhi yethulwa omakhenikha bezenhlalo. IBadgeville inikeza ithuluzi lamathuluzi elihlinzeka ngezixazululo zalezi zinkinga ezicindezelayo.
IBadgeville isebenza ngemishini yemidlalo, imishini yezenhlalo kanye nedumela lemishini futhi ibheka iphethini yomsebenzi noma indlela yokuziphatha noma isivakashi sewebhusayithi. Uhlelo oluqinile luyobe selusebenzisa ukuhlaziywa kokubikezela ukuphendula isivakashi ngokuya ngokuthi isivakashi sikuthatha njengokuhle noma okuthokozisayo. Kumnyombo weBadgeville ukukhiqizwa okuhle Uhlelo luyi-Behaeve Platform elandelela isimilo futhi isebenzise imishini yokuzibandakanya efakazelwe ukuthuthukisa ukuxhumana komsebenzisi, ukubandakanya ikhasimende kangcono nokwenza ngcono ukukhiqizwa kwabasebenzi.
Le Platform Yokuziphatha ifaka phakathi iqoqo lamathuluzi abalulekile.
Injini Yokuziphatha ikhomba futhi ivuze ukusebenza komsebenzisi kwenani eliphezulu.
Imishini Yokuzibandakanya kuthuthukisa ukuzibandakanya kwezivakashi ngokusebenzisa impendulo yesikhathi sangempela ukunikeza umdlalo wezenhlalo njengolwazi lwesivakashi.
I-Behaeve Analytics inikezela amabhizinisi imininingwane kanye nokuqonda okwenza ibhizinisi liqonde ukuthi abantu bahlanganyela kanjani ngokunengqondo nabo.
I-Widget Studio namathuluzi wonjiniyela iqoqo lamathuluzi onjiniyela anamandla avumela ibhizinisi ukuthi lisethe enembile futhi liqinise Izinhlaka Zokuzibandakanya kuma-interface abo.
Ukusabalalisa ukugembula kumakhasimende nabasebenzi bebhizinisi, iBadgeville inikeza ama-Behaeve Framework ayisithupha, okuyizixazululo ze-turnkey ezisebenzisa izinto ezahlukahlukene ze-Behavior Platform.
The Uhlaka lwe-Core Gamification ivumela ibhizinisi ukuthi lisebenzise ukuhlukaniswa ekuxhumaneni okujwayelekile noma ngakunye kwamakhasimende.
The Uhlaka Lwezazi Lomphakathi kucebisa izinkundla zomphakathi.
The Uhlaka lwePhiramidi lokuncintisana itshela ibhizinisi ukuthi yiluphi uhlelo oluqondiswe kumakhasimende olusebenza kahle kakhulu.
The Uhlaka loMhlahlandlela Omnene ivumela amabhizinisi ukuthi athumele izikhuthazo kumakhasimende noma kubasebenzi ukuze baziphathe ngendlela efiselekayo.
The Uhlaka Lomhlanganyeli Womphakathi isiza ibhizinisi ukwamukela ubuchwepheshe bamabhizinisi omphakathi kangcono ngohlelo lwemiklomelo.
The Uhlaka lwe-Company Challenge kungaba yimpendulo yemikhuleko yabakwa-HR, ngoba ivumela ukudala imincintiswano emnandi nezipho ezihlose ukukhulisa ukubophela phakathi kwabasebenzi futhi ngaleyo ndlela zithuthukise ukukhiqiza nokuziphatha.
IBadgeville ibuye inikeze ngeWidget Studio - iqoqo lamawijethi we-gamification we-skinnable futhi alungisekayo. Lawa mawijethi afaka phakathi amabhodi wabaphambili, ukuvezwa kwempumelelo, umsebenzi wesayithi lesikhathi sangempela, izinga labangane, iphrofayli enhlokweni encane, izaziso, nokuningi.
Guqula Amakhasimende abe ngabameli ngeZuberance